निर्वाचनमा भोजभतेर गरेर तडकभडक गर्नेहरुको उम्मेद्धवारी नै रद्द गर्ने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. यादवको चेतावनी
काठमाडौं, २८ भदौ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले २ नम्बर प्रदेशको निर्वाचनमा भोज भतेर गरेर तडकभडक गर्ने उम्मेद्धवारहरुको उम्मेद्धवारी नै रद्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
यादवले आयोगले आचारसंहिता छिटो नलगाएको समेत जिकिर गरे । उनले भने,‘हामीले निर्वाचन आउनुभन्दा ८६ दिन अघिमात्रै आचारसंहिता लगाएका छौं, निर्वाचनको मिति घोषणा भएपनि आचारसंहिता लगाउने अधिकार हाम्रो हो, संसदले पारित गरेको निर्वाचन र कानुनलाई सबैले पालना गर्नुपर्छ।’
तस्विर : पवन भट्टराई तस्विर : पवन भट्टराई
निर्वाचन अयोगलाई चुनावको चटारो, मतपत्र छपाई मंगलबारदेखि सुरु हुने
परीक्षा मर्यादित बनाउनका लागि केन्द्राध्यक्ष गोष्ठी
चाईनीज कम्पनीको लगानीमा याम्बालिङ् विद्युत आयोजना निर्माण हुने